मण्डलीको जीवन र वास्तविक जीवनको बारेमा छलफल | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मानिसहरूलाई के लाग्छ भने, तिनीहरू मण्डलीको जीवनमा मात्र रूपान्तरण हुन सक्छन्। यदि तिनीहरू मण्डलीको जीवनमा छैनन् भने, तिनीहरूलाई तिनीहरू रूपान्तरण हुन सक्दैनन् भन्‍ने लाग्छ, मानौं वास्तविक जीवनमा रूपान्तरण हासिल गर्न सकिँदैन। के तिमीहरू यसको समस्या देख्न सक्छौ? मैले परमेश्‍वरलाई वास्तविक जीवनमा ल्याउने विषयमा पहिले नै कुरा गरिसकेको छु; परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेहरूका लागि यो परमेश्‍वरका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने मार्ग हो। वास्तवमा, मण्डलीको जीवन भनेको मानिसहरूलाई सिद्ध गर्ने एउटा सीमित तरिका मात्र हो। मानिसहरूलाई सिद्ध बनाउने प्राथमिक वातावरण अझै पनि वास्तविक जीवन नै हो। मैले कुरा गरेको वास्तविक अभ्यास र वास्तविक प्रशिक्षण यही हो, जसले मानिसहरूलाई सामान्य मानवताको जीवन प्राप्त गर्न र दैनिक जीवनको क्रममा एक साँचो व्यक्तिको स्वरूपमा जिउन दिन्छ। एकातिर, व्यक्तिले आफ्नो शिक्षाको स्तर उठाउने, परमेश्‍वरका वचनहरू बुझ्ने, र ग्रहण गर्ने क्षमता हासिल गर्न अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ। अर्कोतर्फ, सामान्य व्यक्तिको अन्तर्दृष्टि र विवेक प्राप्त गर्नको लागि व्यक्ति मानवको रूपमा जिउनलाई चाहिने आधारभूत ज्ञानद्वारा सुसज्जित हुनुपर्दछ, किनकि मानिसहरूमा पूर्ण रूपमा यी क्षेत्रहरूको कमी छ। यसबाहेक, मण्डलीको जीवनद्वारा व्यक्तिले परमेश्‍वरका वचनहरूको स्वाद पनि लिनुपर्छ, र बिस्तारै सत्यताको स्पष्ट बुझाई प्राप्त गर्नुपर्छ।
परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्दा, व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई वास्तविक जीवनमा ल्याउनुपर्छ भनेर किन भनिन्छ? मानिसलाई रूपान्तरण गर्ने मण्डली जीवन मात्रै होइन; अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, मानिसहरू वास्तविक जीवनमा नै वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुपर्दछ। तिमीहरू वास्तविक जीवनमा धेरै थोकहरूको अभ्यास गर्न बेवास्ता गर्दै, र तिनीहरूमा तिमीहरूको प्रवेशलाई उपेक्षा गर्दै सधैँ आफ्नो आत्मिक स्थिति र आत्मिक कुराको बारेमा कुरा गर्थ्यौ। तिमीहरू प्रत्येक दिन लेख्थ्यौ, तिमीहरू प्रत्येक दिन सुन्थ्यौ, र तिमीहरू प्रत्येक दिन पढ्थ्यौ। तिमीहरूले खाना पकाउँदै गर्दा पनि तिमीहरू यसो भन्दै प्रार्थना गर्थ्यौ: “हे परमेश्‍वर! तपाईं मभित्रको मेरो जीवन बन्नुहोस्। तर आजको दिन बित्दा, कृपया मलाई आशिष् दिनुहोस् र मलाई ज्ञान दिनुहोस्। तपाईंले आज मलाई जुन कुराको ज्ञान दिनुहुन्छ, कृपया मलाई यो क्षणमा त्यसबारे बुझाउनुहोस्, यसैले कि तपाईंका वचनहरूले मेरो जीवनको रूपमा काम गरून्।” तैंले बेलुकीको भोजन खाइरहँदा पनि यसरी पनि प्रार्थना गर्थिस्: “हे परमेश्‍वर! तपाईंले हामीलाई यो भोजन दिनुभयो। तपाईंले हामीलाई आशिष् दिनुहोस्। आमेन! हामी तपाईंसँग जिउन सकौं। तपाईं हामीसँग हुनुहोस्। आमेन!” तैंले आफ्नो भोजन खाइसकेपछि र भाँडा माझेपछि तँ बरबराउन थालिस्: “हे परमेश्‍वर, म यो कचौरा हुँ। हामी शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएका छौं र प्रयोग गरिएका कचौराहरू जस्ता छौं जसलाई पानीले सफा गर्नैपर्छ। तपाईं त्यो पानी हुनुहुन्छ, र तपाईंका वचनहरू जीवित पानी हो, जसले मेरो जीवनका लागि आपूर्ति गर्दछ।” तैंले थाहा नपाई ओछ्यानमा जाने समय भएको हुन्थ्यो, र तँ फेरि बरबराउन थालिस्: “हे परमेश्‍वर! तपाईंले मलाई दिनभरि आशिष् दिनुभयो र मलाई डोऱ्याउनुभयो। म तपाईंप्रति साँच्चै आभारी छु।…” तैंले आफ्नो दिन यसरी बिताइस्, र त्यसपछि तँ आफ्नो निद्रामा परिस्। प्रायः मानिसहरू दैनिक रूपमा यस्तै जीवन बिताउँछन्, र अहिले पनि उनीहरूले वास्तविक प्रवेशलाई बेवास्ता गर्दछन्, उनीहरूका प्रार्थनाहरूमा ओठे सेवा गर्नुमा मात्र ध्यान दिन्छन्। यो उनीहरूको पहिलेको जीवन हो—उनीहरूको पुरानो मनुष्यत्व। अनि धेरै जना यस्तै प्रकारका छन्; उनीहरूमा कुनै वास्तविक तालिमको अभाव हुन्छ, र उनीहरू अत्यन्तै थोरै वास्तविक रूपान्तरण हुन्छन्। उनीहरू आफ्ना प्रार्थनाहरूमा ओठे सेवा मात्र चढाउँछन्, उनीहरू बोलीले मात्र परमेश्‍वरको नजिक हुन्छन्, तर उनीहरूको बुझाइमा गहिराइ हुँदैन। हामी यो अति साधारण उदाहरणलाई लिऊँ—तेरो घर सफा राख्ने बारेमा। तैंले आफ्नो घर लथालिङ्ग देख्छस्, त्यसैले तँ त्यहाँ बस्छस् प्रार्थना गर्छस्: “हे परमेश्‍वर! शैतानले ममाथि हालेको भ्रष्टता हेर्नुहोस्। म यो घरजस्तै फोहोर छु। हे परमेश्‍वर! म साँच्चै तपाईंको प्रशंसा गर्दछु र तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईंको मुक्ति र ज्ञानविना मैले यो वास्तविकतालाई बुझ्‍नेथिइनँ।” तँ त्यहाँ बस्छस् र लामो समयसम्म प्रार्थना गर्दै बरबराउँछस्, र त्यसपछि तँ केही नभएको जस्तो व्यवहार गर्छस्, मानौं तँ अलमल्ल परेकी एक वृद्ध महिला होस्। वास्तविकतामा अलिकति पनि प्रवेश नगरी, धेरै वटा देखावटी अभ्यासहरू गर्दै आफ्नो आत्मिक जीवन बिताउँछस्! वास्तविक तालिममा प्रवेश गर्ने कार्यमा मानिसहरूका वास्तविक जीवन र उनीहरूका व्यावहारिक कठिनाइहरू समावेश हुन्छ—तिनीहरू परिवर्तन हुने एक मात्र तरिका यही हो। वास्तविक जीवनविना, मानिसहरू रूपान्तरण हुन सक्दैनन्। प्रार्थनामा ओठे सेवा गरेर के फाइदा हुन्छ र? मानिसको प्रकृतिलाई नबुझी, सबै कुरा समयको बरबादी हो, र अभ्यास गर्ने मार्गविना, सबै प्रयास व्यर्थ हुन्छ! सामान्य प्रार्थनाले मानिसहरूलाई भित्री रूपमा आफ्नो सामान्य अवस्था कायम राख्न सहायता गर्दछ, तर तिनीहरू यसद्वारा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन्। मानव स्व-धार्मिकता, अहङ्कार, घमण्ड, सेखीलाई चिन्नु र मानिसका भ्रष्ट स्वभावहरू जान्नु जस्ता कुराको ज्ञान प्रार्थनाद्वारा आउँदैन—परमेश्‍वरको वचन चाखेपछि मात्र तिनको बारेमा थाहा पाइन्छ, र वास्तविक जीवनमा पवित्र आत्माले दिनुहुने ज्ञानद्वारा मात्र तिनको बारेमा जान्न सकिन्छ। आजभोलिका सबै मानिसहरू राम्ररी बोल्न सक्छन्, र उनीहरूले सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रचार सुनेका हुन्छन्—युगौं-युगको अवधिमा अरू सबैले दिएकोभन्दा उच्च—यद्यपि त्यसको थोरै भागलाई मात्र उनीहरूको वास्तविक जीवनमा लागू गरिन्छ। भन्नुको तात्पर्य, तिनीहरूको वास्तविक जीवनमा परमेश्‍वर हुनुहुन्न; रूपान्तरणपछि तिनीहरूमा नयाँ व्यक्तिको जीवन हुँदैन। वास्तविक जीवनमा तिनीहरू सत्यतामा जिउँदैनन्, न त तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई नै वास्तविक जीवनमा ल्याउँछन्। तिनीहरू नरकका सन्तान जस्तो भएर जिउँछन्। के यो स्पष्ट देखिने विचलन होइन र?
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “एउटा अत्यन्तै गम्भीर समस्या: विश्‍वासघात (१)”